(Copy) COVID-19 Somali - PORTLAND REFUGEE SUPPORT GROUP
Si gacan looga geysto sidii loo ilaalin lahaa beesheena nabad iyo caafimaad, boggan wuxuu ku siin doonaa casriyaynta hadda, ilaha iyo macluumaadka Maamulka Caafimaadka ee Oregon, Maamulka Caafimaadka Dadweynaha ee Deegaanka, iyo hay'adaha kale ee gobolka iyo deegaanka.​
​Bartan waxaa ugu dambeysay ee la cusboonaysiiyay: 11-16-2020
​* Haddii xiriir kasta oo boggan ka mid ah uu ku geynayo bog aan ku soo bixin luqaddaada, fadlan ka dooro luqaddaada bogga sare dushiisa, ama isticmaal Google turjum.
​CUSUB: Laba toddobaad oo baraf ah Oregon laga bilaabo Nofeembar 18
Maxaa saameeyay qaboojinta labada toddobaad ee bilaabmaya Nofeembar 18:
Jirdhiska iyo xarumaha jimicsiga: Waa la xiray.
Goobaha madadaalada ee gudaha iyo dibaddaba sida matxafyada, barkadaha iyo jardiinooyinka: Waa la xiray.
Goobaha martigaliya dhacdooyinka gudaha iyo dibadda: Waa la xiray.
Makhaayadaha iyo baararka: Meelaha laga baxo oo keliya.
Xarunta daryeelka muddada-dheer: Booqashooyinka dibadda oo keliya.
Dukaamada cuntada, farmashiyaasha, dukaamada tafaariiqda iyo suuqyada: Waxay ku xaddidan yihiin 75% awoodda ugu badan iyada oo la dhiirigelinayo soo-qaadista dhinaca geeska.
Xafiisyada: Waajibaadka ka-shaqeynta guri-ilaa inta ugu badan ee suurtogalka ah waxayna ka xirtaa dhismayaasha dadweynaha.
Kulamada bulshada ee gudaha iyo dibadda: Wax ka badan 6 qof oo wadarta ah iyo in ka badan 2 qoys ma joogaan.
Ururada diinta ku saleysan iyo isu imaatinada: Wax ka badan 25 qof gudaha kuma jiraan 50 qofna dibedda.
Macluumaadka ku saabsan caymiska dadka aan caymiska lahayn ee ku nool Oregon
Ma u baahan tahay caymis caafimaad? Dad badan oo reer Oregon ah oo aan caymis ku jirin ayaa u qalmi kara Qorshaha Caafimaadka Oregon ama caawimaadda bixinta caymiska Suuqa. Suuqa Oregon ee isqorista furan waxay socotaa Nov. 1 illaa Dec. 15 waana waqtiga kaliya ee sanadka dad badani iibsan karaan caymiska caafimaadka gaarka ah. Haddii aad dhawaan lumisay shaqo ama caymis loo-shaqeeyahaaga, ama aad la kulantay isbeddel xagga dakhliga ah, ama aad leedahay isbeddelo kale oo waaweyn oo xagga nolosha ah, waxaad xaq u leedahay inaad iska qorto qorshooyinka caymiska caafimaadka iyada oo loo marayo Suuqa Suuqa muddo 60 maalmood ah oo isdiiwaan gelin gaar ah kadib dhacdo u qalmid sida shaqo lumis
Waxaad ka codsan kartaa Qorshaha Caafimaadka Oregon halkan OHP.Oregon.gov
xili walba. Si aad u ogaato caymiska iyo keydinta aad heli karto, booqo OregonHealthCare.gov/WindowShop.
Qaado tallaal hargab
Qof kasta oo jira 6 bilood ama ka weyn waa inuu qaataa dureyga. Tallaalka hargabka waxaa laga heli karaa bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka, waaxaha caafimaadka ee deegaanka iyo farmashiyeyaal badan. Tallaalku waa bilaash ama qiimo jaban oo leh qorshooyinka caymiska caafimaadka badankood. Si aad u hesho bukaan socod eegtada tallaalka hargabka, booqo www.flu.oregon.gov oo isticmaal qalabka aaladda tallaalka hargabka ee Oregon Health Authority.
Sigaar cabidda iyo qalabka elektroonigga ah ayaa ka sii dari kara COVID-19
Haddii qof sigaar caba, ama hore u cabi jiray, uu ku dhaco COVID-19, waxay u badan tahay inuu ku dhaco xaalad halis ah oo fayras ah marka loo eego qof aan sigaar cabbin. Joojinta sigaar cabista ayaa ilaalinaysa adiga iyo dadka kaleba inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19.
Xusuusnow inaad ka hortagto sumowga leedhka
Haddii aad ku sii nagaanayso guriga sababo la xiriira COVID-19 (ama sameynta dayactirka guriga), taasi waa wax muhiim ah in maskaxda lagu hayo.
Waxyaabaha maalinlaha ah ee aan kula kulanno guriga, sida rinjiga, waxyaabaha la isku qurxiyo, dhir udgoon iyo carrada dhammaantood waxaa ku jiri kara sunta rasaasta. Gaar ahaan waa muhiim inaad ka tijaabiso gurigaaga leedhka haddii aad leedahay caruur ama caruur yar yar, ama kahor intaadan bilaabin dayactirka guriga. Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka (EPA) waxay liis garayn ballaaran u leedahay waalidiinta si ay u go'aamiyaan haddii ay jirto halista sunta rasaasta ee guryahooda.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka hortagga ku sumowga macdanta `` lead '' waxaad ka heli kartaa bogga EPA.
Tayada Hawada - 11/16/2020 - 12pm
Ka bixitaanka dabka duurjoogta iyo tayada hawada oo xun
Macluumaadka ugu dambeeya ee ku saabsan dabka kaymaha, macluumaadka daadguraynta, iyo hoyga degdegga ah, fadlan booqo: https://wildfire.oregon.gov/
TABABAR CULUS IYO TAYADA XUN EE XUN
Haddii saraakiisha dabka ay ku weydiistaan ​​inaad ka baxdo fadlan si dhakhso leh u samee. Laguu weydiin maayo xaaladaada socdaal marka adiga iyo kuwa aad jeceshahay aad hoy doonato.
Haddii adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah uu karantiil ku jiray oo ay ahayd inuu guuro, fadlan raac taxaddarradan.
Xidho weji dabool haddii lagu weydiiyo inaad ka baxdo gurigaaga ama goobta shaqada dab aawadiis. Wejigaaga daboolaya ayaa kaa ilaalin doona COVID-19 laakiin beddel uma ahan qalabka neefsashada inta lagu jiro tayada hawada xun. Gudaha ku jir sida ugu macquulsan.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo cusbooneysiinta booqo curethoregon.org/wildfires ama wac 211. Wadajir, waxaan isku ilaalin karnaa midba midka kale ammaan iyo xoog.
XUBNAHA QORSHAHA CAAFIMAAD EE Oregon (OHP) XUBNAHA GUDBIYAY
Miyaad si dhakhso leh uga tagtay guriga dabka u dhow dabkii adigoon qabsan qalabka caafimaad ee waara (DME), sahayda ama daawooyinka aad u baahan tahay? Waxaan rabnaa inaad ogaato inaad alaabtan beddeli karto.
Haddii aad wax dhibaato ah kala kulanto beddelidda waxyaabaha sida Qalabka Caafimaadka Dul-waara (DME), sahayda ama daawooyinka laguu qoro, Ururka Daryeelkaaga Isuduwidda ah (CCO) ayaa kaa caawin kara.
Ka hel macluumaadkaaga xiriirka CCO bogga OHP. Haddii aad tahay xubin OHP ah oo leh kaar furan, kala xiriir adeegyada xubnaha: 800-273-0557.
Waan ognahay inay kuwanu yihiin waqtiyo adag oo aan doonayno inaan kaa caawinno inaad hubiso inaad haysato dawada iyo sahayda caafimaad ee aad ugu baahan tahay inaad caafimaad ahaato.
SHAQAYNAYA INTA AAD TAYO XUN XUN
Waxaa jira talaabooyin loo-shaqeeyahaagu u baahan yahay inuu qaado si uu kaaga ilaaliyo caafimaadkaaga oo ka xoog badan qiiqa iyo tayada hawada ee halista ah - gaar ahaan haddii aad ka baxsan tahay shaqada beeraha ama dhismaha. Tan waxaa ka mid ah:
Xidhitaanka waxqabadka shaqada banaanka marka tayada hawada aaggu noqoto "mid aan caafimaad qabin," ama gaadho Heerka Tayada Hawada ugu yaraan 151.
U fasaxida shaqaalaha xaaladaha caafimaad ee hoose inay guriga joogaan.
Dib-u-habeynta jadwalka shaqada, saacadaha iyo shaqooyinka hab u oggolaanaya shaqaalaha inay ka helaan gargaar hawo dibedda ah oo qiiq badan.
Bixinta N95 wejiyadaha iyo ku wargelinta shaqaalaha adeeggooda iyo daryeelkooda habboon. Fiidiyowgan Oregon OSHA wuxuu ku dhex maraa loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha nidaamkaas.
Macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan qiimeynta tayada hawada ee kuugu dhow, booqo: http://oregon.envi-das.com/home/map
Khariidadaha kale iyo macluumaadka ku saabsan qiiqa dabka duurjoogta ee Oregon, booqo: http://oregonsmoke.blogspot.com/
Ka joojinta ka saarida guriga waxay ilaalisaa kireystayaasha ilaa iyo Disember 31
Gudoomiyaha Kate Brown ayaa soo saaray Amar Fulineed oo cusub oo lagu hubinayo in kireystayaasha Oregon laga ilaaliyo guri ka saarista illaa iyo Dec. 31, 2020. Mulkiilayaasha guryaha kama saari karaan kiraystayaasha lacag bixin la'aan inta lagu jiro waqtigan... Akhri wax dheeraad ah
Waxbarashada: Dugsiyada Oregon dib uma furi doonaan illaa ay gobolku ka arkeen wax-ku-ool weyn oo coronavirus-ka, Guddoomiyaha Kate Brown ayaa leh
Heerka infekshanka Coronavirus ee Oregon ayaa si toos ah loo qeexay, saraakiisha gobolka ayaa sidaas leh. Laakiin haddii isbeddelkaasi uusan bilaabin inuu hoos u dhaco ... Akhri wax dheeraad ah
​Is-qor si aad u Hesho Cusboonaysiinta Waaxda Waxbarashada ee Oregon
​Badhasaabka Brown wuxuu fidiyaa illaalinta la wareegida ilaa Disember 31
Badhasaabka Kate Brown wuxuu balaadhiyay ilaalin laga qaadayo guryaha mulkiilayaasha Oregon iyo milkiileyaasha ganacsiga iyada oo loo marayo talaabo fulin ah, illaa iyo Diseembar 31 ... Akhri wax dheeraad ah
Tijaabada COVID-19 ee Oregon
Miyaad la yaaban tahay meesha aad ka heli karto goobta baaritaanka COVID-19? OHA waxay iskaashi la leedahay Google, Castlight iyo maamulka caafimaadka bulshada ee deegaanka si ay kaaga caawiyaan inaad hesho macluumaad maxalli ah oo ku saabsan halka tijaabada laga heli karo. In kasta oo aan si adag u ... Akhri wax dheeraad ah​
Tijaabinta: Suuragal ma tahay in la helo diidmo been ah?
Tijaabooyinka fayraska ee COVID-19 ayaa ah habka ugu kalsoon ee lagu ogaan karo qof qaba COVID-19. Laakiin maxaad sameyn laheyd haddii baaritaanka uu yahay mid taban? Dareenka beenta ahi wuxuu dhacaa seddex meelood meel waqtiga.
Haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19, waa inaad karantiil ku qaadataa 14 maalmood, xitaa haddii aadan lahayn astaamo.
Haddii aad leedahay calaamado, waa inaad is-karantiimeysaa ugu yaraan 10 maalmood ama illaa calaamadaha ay kaa baxayaan.
Si aad wax uga sii ogaato tijaabada COVID-19, booqo healthoregon.org/covid19testing.
Waxaad xaq u yeelan kartaa in lagaa caawiyo bixinta kirada, yutiilitida, daryeelka carruurta, ama dheefaha kale... Akhri wax dheeraad ah
Fasaxa lacag la'aanta ah ee loo heli karo karantiilka ama go'doominta COVID-19
Miyay tahay inaad karantiil ahaato ama aad go'doomiso COVID-19 dartii laakiin aadan bixin waqti fasax ah?
Barnaamij cusub ayaa bilaabmaya toddobaadkan si loo caawiyo dadka ka shaqeeya Oregon ee u baahan in la karantiilo ama la karantiilo sababo la xiriira COVID-19, laakiin aan marin u helin fasaxa jirada ee la bixiyo ee COVID-19. Barnaamijka fasaxa mushaharka ee ku meelgaarka ah ee COVID-19 waxaa lagu abuuray $ 30 milyan oo laga helay dowladda federaalka si looga caawiyo Oregon inay ka jawaabto faafitaanka cudurka coronavirus.
Dadka uqalma waxay heli doonaan $ 120 maalintiiba lacag bixin ah ilaa 10 maalmood oo shaqo (wadarta $ 1,200) waqtiga looga baahan yahay karantiil.
Shaqaaluhu waxay ka dalban karaan khadka tooska ah laga bilaabo maanta oregon.gov/covidpaidleave.
Foomka dalabka waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, iyo Ruush. Kuwa aan marin u helin codsiyada elektaroonigga ah waxay wici karaan 833-685-0850 (lacag-la’aan) ama 503-947-0130. Kuwa u baahan caawimaad luqad kale oo aan ahayn seddexdan waxay wici karaan 503-947-0131 caawimaad. Waaxda Macaamiisha iyo Adeegyada Ganacsiga (DCBS) iyo Waaxda Canshuuraha ayaa iska kaashanaya barnaamijka cusub si loo hubiyo in shaqaalaha ay buuxiyaan shuruudaha u-qalmitaanka ee lagama maarmaanka ah. Si aad u aragto haddii aad la kulantid, qaado su'aalahaan u-qalmitaanka, ama eeg shuruudaha ku yaal websaydhka DCBS. Maaddaama lacagaha la heli karo ay kooban yihiin, barnaamijka waxaa loo heli karaa oo keliya xilliyada karantiillada ee yaallay ama ka dib Sebtember 16. Codsadeyaashu waxay dalban karaan keliya hal xilli karantiil.
COVID-19 dillaaca goobaha shaqada - Badbaadada hawada gudaha iyo COVID-19
Tilmaamaha COVID-19 ee kulliyadaha iyo jaamacadaha
Markuu sanad-dugsiyeedka cusubi soo dhowaado, waxaad la yaabi kartaa sida kulleejooyinka iyo jaamacadaha Oregon ay u qorsheynayaan badbaadada ardayda, macallimiinta iyo shaqaalaha inta lagu jiro COVID-19. Waa kuwan xaqiiqooyin kaa caawin kara:
Kuleej kastaa wuxuu leeyahay dabacsanaan si loo go'aamiyo haddii iyo sida looga furo xaruntooda gudaha tilmaamaha gobolka iyo la shaqeynta hay'addooda caafimaadka dadweynaha ee maxalliga ah. Guud ahaan Oregon, machadyadu waa inay raacaan tilmaamaha hadda jira ee COVID-19 ee loogu talagalay tacliinta sare, oo ay ka mid yihiin:
Ubaahan daboolida wajiga
Tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka fayraska, sida nadaafadda oo kordha iyo fogeynta jirka.
Ilaalinta la kordhiyay ee dadka halista sare leh
Xaddidaya gelitaanka dadweynaha ee xerada
Xaddididda tirada dadka ee qolalka jiifka
Laakiin waxa iskuullada iyo bulshadoodaba uga dhigaysa kuwa ugu ammaansan ayaa ah haddii qof walba, oo ay ku jiraan ardayda, ay sameeyaan xulashooyin caqli-gal ah si ay sida ugu fiican ugu ilaashadaan naftooda iyo kuwa kale, oo ay uga dhigaan wax ka badan.
Waxaad waxbadan ka baran kartaa daawashada tan Q&A from the Higher Education Coordination Commission and Oregon Health Authority about what to expect at Oregon colleges and universities during COVID-19.
Ku laabo kulliyadda: Ku xafidista qolka hurdada​
Haddii aad tahay arday kulleej ah oo isu diyaarinaya nolosha xerada inta lagu jiro COVID-19, waxaad ka walwalsan tahay inaad ku nabad gasho meelaha la wadaago, sida qolalka ama guryaha. Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha haddii aad aadeyso iskuulka Oregon ama gobolka ka baxsan:
Joogso ugu yaraan lix fuudh dadka aan la noolayn. Tan macnaheedu waxaa weeye inaad kolba dhinac u wareegeyso markaad wiishka ama jaranjarooyinka isticmaaleyso, ama markaad isticmaaleyso meelaha la wadaago sida musqusha, jikada, dharka lagu dhaqdo ama qolka jimicsiga.
Xidho maaskaro ama weji daboolaya meelaha lala wadaago dadka aan kula noolaan doonin.
Ku yaree martida ugu yaraan, sida aad guriga ugu joogi lahayd oo kale. Isku imaatinada gudaha ayaa wali ku kooban 10 qof ama in ka yar.
Ku dadaal nadaafadda gacmaha.
Ha la wadaagin cuntada, suxuunta, muraayadaha ama maacuunta wax lagu cuno.
Ha dhigin waxyaabaha shakhsiga ah sida cadayga dusha dusha la wadaago sida saxanka ama miiska. Ku rid walxahaas sariish aad qaadi karto si aad isaga ilaaliso taabashada dusha sare.
Waxaad ka heli kartaa talooyin dheeraad ah bogga Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada.
Dugsiyada Oregon sidoo kale waxay hayaan bogaggooda ku saabsan xeerarka badbaadada ee COVID-19. Waxaad ka heli kartaa xiriiriyeyaal bogaggan websaydhka Guddiga Isuduwidda Tacliinta Sare ee Oregon.
Aasaasidda goob ammaan ah oo loogu talagalay shaqada qadka iyo dugsiga
Haddii aad inta badan ka shaqeyneyso guriga ama aad leedahay carruur ugu yaraan qeyb ka mid ah sannad-dugsiyeedkooda ku qaadanaya guriga, waxaa muhiim ah in la helo goobo-shaqo oo ammaan iyo caafimaad labadaba leh. Tusaale ahaan:
Kumbuyuutarka waa in lagu dhejiyaa shaashadda heerka isha si adiga ama ilmahaagu aad u fadhiisan kartaan si toos ah oo aad u tababbari kartaan qaab-joog wanaagsan.
Kursigu waa inuu siiyaa raaxo ku filan iyo taageero dhabarka ah si loo fadhiisto waqti dheer.
Qaado nasashooyin si aad u kala bixisid oo socod u aad si aad uga fogaato inaad fadhido maalinta oo dhan.
Waxa u sii dheer samaynta waxyaabo si khaldan u sax ah, waxaa muhiim ah in la hubiyo in goobta shaqadu ku habboon tahay shaqada iyo waxbarashada. Tusaale ahaan:
Goobta shaqadu miyay ka madhan tahay qas iyo mashquulin?
Qalabku sida warqad, buugaag iyo qalin qalin ma ku jiraan oo diyaar ma u yihiin in la isticmaalo?
Waxyaabaha ma loo abaabulay si adiga iyo ardaygaagu aad si fudud wax u heshaan?
Kheyraadka kaa caawinaya adiga iyo dhallintaada adoo adeegsanaya COVID-19
Dhallinta, xagaaga sida caadiga ah waxaa loola jeedaa inaad la saaxiibo saaxiibbadaa, tagista kaamka, aqallada loo yaqaan 'BBQs' ama shaqo xagaaga ah. Waxyaabo badan ayaa ka duwanaa sanadkan. Markuu sanad dugsiyeedka cusub soo dhowaado, agabyadan loogu talagalay dhalinyarada waxay ka caawin kartaa inay sifiican ula noolaadaan iyaga oo gaara.
Sources of Strength waxay bixisaa ilo si looga caawiyo dhalinyarada inay xoog yeeshaan, ku dhaqmaan is-daryeelid iyo ku dhaqmaan mahadnaq.
YouthLine waa mushkilad dhalinyaro-dhalinyaro ah, taageero iyo khad caawimaad furan maalin kasta laga bilaabo 4 ilaa 10 pm. PST dhanka wicitaanka, qoraalka iyo wada sheekaysiga. Dadka waaweyni waxay ka jawaabaan wicitaannada taleefannada waqtiyada kale oo dhan, sidaa darteed dhallintu waxay leeyihiin taageero 24/7.
Youth ERA waxay siisaa dhowr dariiqo oo dhalinyarada iyo dhalinyarada qaangaarka ah ay kula kulmaan khadka tooska ah, ka helaan taageero ugana hadlaan nolosha.
OHA waxay caawimaad u leedahay waalidiinta iyo daryeelayaasha, sidoo kale. Khadadka diiran ee Reach Out Oregon ayaa kaa caawin kara inaad kula hadashid waqtigan gaarka ah waalidiinta kale ee fahmay.
Deeqaha laga heli karo Oregon Cares Fund
Xubnaha Golaha Sharci dejinta ee Oregon ee Madow, Asal ahaan iyo Dad ka mid ah Caucus waxay ka shaqeeyeen sidii loo abuuri lahaa Sanduuqa Daryeelka ee Oregon. Sanduuqa wuxuu maal-galiyaa dadka Madow, ganacsiyada ay leeyihiin Madowga iyo ururrada ku saleysan bulshada ee uu hoggaamiyo Madow.
Sanduuqa Oregon Cares Fund waa deeq-hoosaad ka socda Qasnadda Mareykanka ee bixinta Lacagaha Gargaarka ee Coronavirus ee ay heshay Gobolka Oregon iyadoo la raacayo Sharciga Gargaarka, Gargaarka iyo Amniga Dhaqaalaha (CARES) ee Coronavirus.
Deeqaha way ku kala duwanaan doonaan cabirka shaqsiyaadka, qoysaska, ganacsiyada iyo kuwa aan macaash doonka ahayn, iyadoo kuxiran macluumaadka lagu soo gudbiyay arjiga. Shakhsiyaadka iyo qoysaska waxay xaq u yeelan karaan inay helaan deeqo $ 1,000, $ 2,000 ama $ 3,000, iyadoo kuxiran saamaynta dhaqaale ee COVID-19 iyo tirada qoyska. Ganacsiyada ama kuwa aan macaash doonka ahayn ee shaqaalaha waxay heli doonaan deeqo ku saleysan xaddiga dakhliga ka lumay COVID-19 iyo kharashyada dheeraadka ah ee la xiriira COVID-19.
Waxbadan baro oo codso: thecontingent.org/oregon-cares
Helo ilooyinka aad u baahan tahay.
COVID19 English from PBEM on Vimeo.
* ​Ka dib markaad gujiso ikhtiyaar, fadlan dooro luqaddaada xagga sare ee boggaas.
Cusboonaysiinta: Oktoobar 20 - degmada Multnomah waxay ku sii jirtaa Wajiga 1 ee dib u furista. Waxaan kula cusbooneysiin doonnaa macluumaad dheeri ah inta la heli karo. Waxaa furmay xaddidan furitaanka makhaayadaha, adeegyada shaqsiyadeed, goobaha jimicsiga iyo dukaamada waaweyn. Waxa kale oo jira xaddidyo ku saabsan cabbirka ururinta ...​ Akhri wax dheeraad ah
Waxaan rabnaa inaan xoojino muhiimadda qof walba uu u leeyahay inuu ilaaliyo caafimaadka bey'adeena anagoo raacno tilmaamaha caafimaadka bulshada. Guriga joog, wanaag ahaaw oo xiriir lahow. Si wada jir ah ayaan u wada fidinaynaa wareega… Akhri wax dheeraad ah
Oktoobar 15 - Gobollada Washington, Multnomah iyo Clackamas waxay u wada dhaqaaqi doonaan sidii gobol ahaan wixii horumar dheeri ah oo dib u furitaan ah. Diyaar uma ihin inaan codsno wejiga 2 waqtigaan ... Akhri wax dheeraad ah
Ganacsiyada iyo waxqabadyadu waxay u hoggaansami doonaan tilmaamaha Wajiga 2 dib-u-furista iyadoo la raacayo tallaabooyinka kala fogaynta bulshada iyo heerarka caafimaadka. Ganacsiyadu sidoo kale waxay u baahan karaan inay la kulmaan shuruudo dheeri ah oo si gaar ah loogu horumariyey warshadooda... Akhri wax dheeraad ah
Wixii ugu dambeeyay oo iimeel lagugu soo dirayo ka helo Oregon Health Authority (Maamulka Caafimaadka Oregon).